मेरो कार्यकालमा ‘म्याच फिक्सिङ’ हुँदैन् र हुन दिन्नः एन्फा अध्यक्ष शेर्पा
काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का नवनिर्वाचित अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले म्याच फिक्सिङ रोक्न तत्काल कानून आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘म्याच फिक्सिङको अन्त्य गर्न तत्काल कानून आवश्यक छ, त्यो कानून ल्याउनको लागि सरोकारवाला निकाय, सरकार र संसदले विशेष पहल लिनुपर्छ।’ उनले अनुशासन कमिटि र एपिल कमिटी गठन गरेर खेलमा रहेका...
हैदरावादसँग ७ विकेटले हा¥यो दिल्ली
काठमाडौं । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) मा शनिबार भएका खेलमा हैदरावादले घरेलु मैदानमा दिल्ली डेयरडेभिल्सलाई ७ विकेटले हरायो । खेलमा पहिले ब्याटिङ गरेको दिल्लीले निर्धारित २० ओभरमा ५ विकेट गुमाएर १ सय ६३ रन बनाएको थियो । जवाफमा १ सय ६४ रनको विजय लक्ष्य हैदरावादले १ बल बाँकी छँदा ३ विकेट गुमाएर भेटायो । हैदरावादको जितमा अलेक्स हेल्सले ४५,...
जेसीआई इण्टर स्कूल टी २० क्रिकेट टुर्नामेण्ट सम्पन्न
कलैया कलैया सिटी जेसीजको आयोजनामा कलैयाको सिद्धेश्वर खेलमैदानमा बैशाख १४ गते देखि शुरु भएको टी २० क्रिकेट टुर्नामेण्ट आज सम्पन्न भएको छ । सम्पन्न खेलमा कलैया बाल विद्या मन्दिर र ग्यालेक्सी पब्लिक ई. स्कूलबीच भएको फाइनल खेलमा १८ रनले बाल विद्या मन्दिर ई. स्कूलले जीत हासिल गरेको छ । सो सम्पन्न कार्यक्रममा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सासद...
आइपीएलमा आज के सन्दिप खेल्न पाउलान् ?
काठमाडौं । इन्डियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) को ११ औं संस्करणको जारी सिजनमा नेपाली युवा स्पिनर सन्दीप लामिछाने आवद्ध टीम दिल्ली डेयरडेभिल्सले आज बलियो टिम सनराइजर्स हैदरावादसँग खेल्दै छ । अहिलेसम्म खेलका ८ मध्ये तीनमा जित र ५ खेलमा हार व्याहोरेर छैटौं स्थानमा रहेको दिल्लीले सिजनको बलियो टीम सनराइजर्स हैदरावादसँग आज भिड्न लागेको हो । युवा...
आर्सनललाई हराउँदै एथलेटिको म्याड्रिड फाइनलमा
एजेन्सी । युरोपा लिगमा उपाधि जित्दै आर्सनल छोड्ने प्रशिक्षक आर्सेनी वेंगरको चाहना पूरा नहुने भएको छ। युरोपा लिगअन्तर्गत बिहीबार राति भएको दोस्रो लेगमा आर्सनललाई १–० ले हराएर समग्रमा २–१ को जित निकाल्दै एथलेटिको म्याड्रिडले फाइनलमा स्थान पक्का गर्‍यो। सन् २०१६ को च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा रियल म्याड्रिडसँग पराजित भएपछि...
सुधारिँदै दिल्लीको ब्याटिङ, राजस्थान पराजित
एजेन्सी । आइपीएल क्रिकेटमा दिल्ली डेयर डेभिल्सले तेस्रो जित हात पारेको छ। बुधबार रातिभएको वर्षाले प्रभावित खेलमा दिल्लीले राजस्थान रोयल्सलाई डकवर्थ लुईस विधिअनुसार ४ रनले हरायो। खेलमा टस हारेर पहिले व्याटिङको गरेको दिल्लीले १८ औं ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १ सय ९६ रन जोडेको अवस्थामा वर्षाले खेल रोकियो। दिल्लीका रिसभ पन्तले ६९ रन जोड्दा...
एजेन्सी । इन्डियन प्रिमियर लिगअन्तर्गत सोमबार भएको हाइस्कोरिङ खेलमा दिल्ली डेयर डेभिल्स चेन्नई सुपर किंग्ससँग १३ रनले पराजित भएको छ। चेन्नई भने पुनः लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको चेन्नेईले २० ओभरमा चार विकेट गुमाएर २११ रन बनाएको थियो। उत्कृष्ट सुरुवात गरेको चेन्नईका लागि सेन वाटसन र फाफ डुप्लिसिसले...
६ विकेटले पराजित कोलकातासँग बेंगलोर
एजेन्सी । इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएलको आइतवार राति सम्पन्न खेलमा कोलकाता नाइटराइडर्स विजयी भएको छ । कोलकताले रोयल च्यालेन्जर्स बेंग्लोरलाई ६ विकेटले हराएको हो । १ सय ७६ रनको लक्ष्य कोलकाताले ५ बल बाँकी छँदै ४ विकेट गुमाएर भेट्टायो । कोलाकातालाई जिताउन क्रिस लायनले ६२ र रोविन उथप्पाले ३६ रन बनाए । त्यसैगरि, सुनिल नाराइनले २७ र दिनेश...
मुम्बईले हरायो चेन्नाईलाई
काठमाडौं । इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) क्रिकेटमा मुम्बई इन्डियन्सले दोस्रो जित हात पारेको छ । गएराति भएको खेलमा शीर्ष स्थानको चेन्नई सुपर किङ्सलाई ८ विकेटले हराउँदै मुम्बईले प्रतियोगितामा केही राहत पाएको हो । जारी प्रतियोगिताको सातौं खेलमा चेन्नईको त्यो दोस्रो हार हो । जितपछि मुम्बई अंक तालिकाको छैटौं स्थानमा उक्लिएको छ । चेन्नाईले...
प्रशिक्षकबाट म्याराडोनाले राजीनामा दिए
एजेन्सी । डिएगो म्याराडोनाले अल फुजाइराह क्लबको प्रशिक्षकबाट राजीनामा दिएका छन् । अर्जेन्टिनाका पूर्वखेलाडी ५७ वर्षे म्याराडोना मे महिनादेखि सो क्लबको प्रशिक्षक थिए । तर संयुक्त अरब इमिरेट्सको दोस्रो डिभिजनको शीर्ष दुईमा पर्न असफल भएपछि उनले राजीनामा दिएको बताइएको छ । शुक्रबार खोर्फाकान क्लबसँग अल फुजाइराह क्लब १–१ को बराबरीमा...
फस्ट आइएमई जेटीआई ग्राण्ड जुनियर ओपन लन टेनिस प्रतियोगिता हुने
काठमाडौं । आइएमई फाउन्डेसनको आयोजना एवम् अल नेपाल लन टेनिस एसोसियसन (एएनएलटीए) को सहयोगर जुनियरटेनिस इनिसियसन (जेटीआई) को संयोजनमा यहि मिति २०७५ साल जेष्ठ ०६ गतेदेखि १२ गतेसम्म ‘फस्ट आइएमई जेटीआई ग्राण्ड जुनियर ओपन लन टेनिस’ प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागिएको सहर्ष जानकारी गराउँदछौं । टेनिस खेलको दिगोविकासमा सहयोग पुगोस् भन्ने मूख्य...
विश्वकप क्रिकेटको खेलतालिका यस्तो छ
एजेन्सी । आगामी वर्ष इंग्ल्याण्ड र वेल्समा आयोजना हुने विश्वकप क्रिकेटको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ । विश्वकपको पहिलो खेलमा आयोजक इंग्ल्याण्डले दक्षिण अफ्रिकासँग खेल्नेछ । मे ३० देखि जुलाई १४ तारिखसम्म ग्रेट व्रिटेनको विभिन्न सहरमा हुने प्रतियोगिताको उद््घाटन खेल लण्डनस्थित द ओभल मैदानमा हुनेछ । उद्घाटन खेलमा इंग्ल्याण्डले दक्षिण...
हैदराबाद उक्लियो दोस्रो स्थानमा
एजेन्सी । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल)मा सनराइजर्स हैदराबाद दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ । उसले किङ्स ११ पञ्जाबलाई १३ रनले हराएउँदै दोस्रो स्थानमा उक्लिएको हो । १ सय ३३ रनको सामान्य लक्ष्य पछ्याएको पञ्जाबलाई १९.२ ओभरमा अलआउट गर्दै १ सय १९ रनमा समेटेपछि हैदराबाद विजयी भएको हो । त्यसअघि टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको सनराइजर्स हैदराबादले...
बैंग्लोरलाई हराउँदै चेन्नाई १०औं स्थानमा
वैशाख १३, २०७५ काठमाडौं । इण्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) मा चेन्नाई सुपर किंग्सले रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोरलाई पाँच विकेटले हराएको छ । चिन्नास्वामी स्टेडियममा पहिले व्याटिङ गर्दै बैंगलोरले चेन्नाईसामु २०६ रनको विजय लक्ष्य दिएको थियो जसलाई चेन्नाईले दुई बल बाँकी रहँदा पाँच विकेट गुमाएर पूरा गर्यो । यो जितको श्रेय कप्तान महेन्द्र सिंह...
दिल्लीका कप्तान गम्भीरले दिए राजीनामा
वैशाख १२, २०७५ एजेन्सी । नेपाली खेलाडी सन्दीप लामिछाने सहभागी आईपीएल (इन्डियन प्रिमियर लिग) टीम दिल्ली डेयर डेभिल्सको कप्तानबाट गौतम गम्भीरले राजीनामा दिएका छन् । टीमको खराब प्रदर्शनको जिम्मेवारी लिँदै आफूले राजीनामा दिएको उनले बताएका छन् । गम्भीरको ठाउँमा युवा ब्याट्सम्यान श्रेयस अय्यरलाई नयाँ कप्तान नियुक्त गरिएको छ । अंक...